प्रेम दिवस र गुलाव ! हरेक रङहरुको आफ्नै महत्त्व – Puleso
प्रेम दिवस र गुलाव ! हरेक रङहरुको आफ्नै महत्त्व
प्रेम दिवसका दिन प्रेमी प्रेमिकाको मात्र होइन गुलावको पनि भाउ साह्रै बढ्दो रहेछ । जुन गुलाव अन्य दिनहरुमा १० देखि १५ रुपैयाँमा आउँछ त्यसको मूल्य प्रेम दिवसको अबसरमा ५० भन्दा धेरै पर्ने गरेको छ । राजधानी लगाएतका सहरहरुमा यसैगरी गुलावको भाउ आकासिएको छ । तर गुलावसँगै कतै माया बढेको छ कतै माया सस्तिएको छ । एकछिनको रमझमको माया बस्ने चलन जो चलेको छ सहरहरुमा आजभोलि…
प्रेम दिवसमा आजभोलि खालि प्रेमी जोडिले मात्र माया दर्शाउने गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा नेपाल भारत लगाएतका देशहरुका अन्यले पनि आफ्ना प्रियजनहरु अथवा मान्यजनहरुलाई गुलाव दिएर प्रेम दर्शाउने गरेका छन् । तर उनीहरुले दिने गुलावको रङ भने फरक फरक हुने गरेको छ । गुलावका रङले त्यसको आसय ब्यक्त गर्ने गरेको छ ।
रातो गुलाव खासगरी प्रेमको प्रतिक मानिन्छ । त्यसैले पनि प्रेमी प्रेमीकाहरु प्रेम दिवसका दिन एक अर्कालाई रातो गुलाव दिएर प्रेम दर्शाउने गरेका छन् । आजभोलि महंगा उपहारहरु पनि सँगै दिने चलन रहेको छ । यसैकारणले पनि प्रेम दिवसमा रातो गुलावको मूल्य बढ्ने गरेको छ । त्यस्तै सेतो गुलाब शान्ति, पहेलो गुलाव दोस्तीको प्रतिक मानिन्छ । रातो बाहेक अन्य रङका गुलाव भने सामान्य मूल्य नै पर्ने गरेको छ ।
हरेक रङहरुको यहाँ आफ्नै अर्थ छ
फुल त गुलावको नै हो, यद्यपी हरेक फूलको रङले फरकफरक अर्थहरु लगाएरहेका हुन्छन् । त्यसैले जब तपाई आफ्नो भावना ब्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यसबेला गुलाव मात्र नहेरेर त्यसको रङमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । किनकि तपाईले भन्न खोजेको र ब्यक्त गर्न खोजेको कुरा त्यो गुलावको रङले पनि अर्थ लगाउन सकोस ।
धेरैजसो ब्यक्तिहरुलाई अनुमान नहुन सक्छ की कुन समयमा कस्लाई कुन रङको गुलाव दिउँ र कति सङ्ख्यामा दिने भन्ने कुराहरु । यहाँ कुन रङको दिने र कति सङ्ख्यामा दिने भन्ने अर्थ लाग्दछ । जस्तो की दुई ओटा गुलाव दिनुको अर्थ हुन्छ, दुई भएर पनि एक जस्तै छौँ वा हौँ भन्ने अर्थ लाग्छ । परम्परागत रुपमा नै खासगरी विवाहमा दुई गुलाव दिने प्रचलन छ ।
रातो गुलावले साँचो माया जनाउँछ । यसका साथ रातो गुलावले माया मात्र होइन इज्जत प्यासन र अभिरुचि पनि जनाउने गर्छ तर विशेष गरी प्रेम कै प्रतिकका रुपमा रातो गुलावलाई लिने गरिएको छ ।
गुलावी रङको गुलाव
गुलावी रङको गुलावले सुन्दरता जनाउँछ र हल्का गुलावी रङको गुलावको अर्थ भने सहानुभुती र गाढा गुलावी रङलाई भने कृतज्ञतासँग जोड्ने गरिएको छ ।
यस रङको गुलावको अर्थ जादु वा मोह सँग जोडिएको छ । यदि कसैको पहिलो नजरमा नै मायाँ बसे यस्तो रङको गुलाव दिने चलन छ ।
सेतो रङको गुलावको अर्थ भने शुद्धता सरलता र शान्तिसँग जोडिन्छ ।
फूल्नै लागेको गुलाव बढ्दै गएको मायाको प्रतिक मानिन्छ । सुन्दर रुपमा फक्रेको गुलाव सँगै दुई गुलाबको कोपिला मिसाएर दिनुभयो भने त्यसले तपाईको लुकेको मायाको परिचय दिन्छ ।
असम्भव को प्रतिक
प्रेमको प्रतीक मानिने रेड रोज अर्थात् रातो गुलाब । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे’, ‘आइ लभ यु’ भन्नलाई यही रातो गुलाब चाहिन्छ । जुन भावना शब्दमार्फत व्यक्त गर्न वर्षौंसम्म सकिँदैन, गुलाबको फूल काफी हुन्छ । प्रेमका भाव झल्कने कुरा लेखिएको प्लास्टिकले बेरिएको उक्त फूल नै हिजोआज बढी चलन चल्तीमा आउन थालेको छ । केही वर्ष यता नेपालमा पनि यो संस्कार मौलाउँदै गएको छ ।
भ्यालेनटाइन डे र रातो गुलाव
भ्यालेन्टाइन डेको सुरुवात सन् २६९ मा रोमनबाट शुरू भएको मानिन्छ । तेस्रो शताब्दीका रोमन शासक सम्राट क्लाउडियस दोस्रोका पालामा देशवासीलाई सैन्य भर्तीका लागि उर्दी जारी भयो। नारीसँगको सम्बन्धका कारण सैनिक कमजोर हुने ठहर गर्दै सम्राट्ले प्रेम र विवाहमा रोक लगाए । तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यस अभियानलाई सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरे र थुप्रै सैनिकलाई वैवाहिक सूत्रमा बाँधिदिए ।
आफ्नै अभियानविरुद्घ गतिविधि सह्य नभएपछि सम्राटले पादरीलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजाय दिए । भ्यालेन्टाइन पादरी जेलमा छँदा जेलरकी छोरी नै भेट्न आइरहन्थिन् । मृत्युदण्ड पाउनु केही दिनअघि ‘लभ फ्रम योर भ्यालेन्टाइन’ भनी हस्ताक्षर गरेको प्रेमपत्र पादरीले आफ्नी प्रेमिका अर्थात् जेलरकी छोरीलाई थमाए । भ्यालेन्टाइनलाई सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन मृत्युदण्ड दिइयो। प्रेमका लागि भ्यालेन्टाइनको यही बलिदानको सम्मानमा फेब्रुअरी १४ लाई भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
माया गर्ने जोडिहरु सबैलाई आउँदो प्रेम दिवसको शुभकामना, गुलावले के अर्थ राख्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मनपरेको मायाँ गरेको मान्छेलाई भन्नुभएको छैन भने पनि भन्नुस है । माया गरेर मात्र हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ की त मायाको आभास दिलाउन सक्नै पर्छ। भोलि मन परेको मान्छेलाई अर्कैले आफ्नो बनाउला अनि उसको याद बाहेक केही बाँकी रहन्न त्यसैले भ्यालेन टाइनडे पर्खेर बस्नु पर्दैन रातो गुलाव नै खोज्नु पदैन माया गरेको मान्छेलाई मायाको आभास दिलाउँनुपर्छ , आफ्नोपनको आभास महसुस हुने बनाउनुपर्छ नत्रभने अब्यक्त प्रेमले पनि सताइरहन्छ । एकले अर्काले भन्छन भनेर सोच्नु भन्दा आफैले भनिहाल्नुस आइ लभ यु नै भन्नु पर्ने के छ र मायाको आभास गराउन सक्नु नै काफी हुन्छ । कतिपय सम्बन्धहरु यस्ता हुन्छन् जो चाहेर पनि नाम दिन सकिदैनन् ।एजेन्सी